Web Makeovr: tranokala mamorona habaka banga eo anelanelan'ny sary masina amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Raha iray amin'ireo olona tia fanamboarana amin'ny iPhone ianao ary tsy namaky ny findainao, dia heveriko fa ho tianao ilay tolo-kevitra hataontsika anio ary atolotray anay amin'ny anaran'ny Web Makeovr. Ny zavatra azonao atao amin'ny fampiharana an'ity tranonkala ity dia ny mamorona habaka banga eo anelanelan'ny sary masina na farafaharatsiny manome ny fahatsapana fa azo foronina ireo, afaka hanafatra azy ireo araka izay itiavanao azy, na hanakorontana azy ireo eo amin'ny efijery araka ny itiavanao azy.
Raha ny marina, na dia hitanao aza ny fomba fiasany Web Makeovr Ao amin'ny horonantsary etsy ambony, ny tena marina dia ny ataon'ity fampiharana ity dia ny famoronana sary masina mangarahara izay apetraka amin'ny rindrina nofidinao, ary izany dia miteraka fahatsapana afaka mametraka azy ireo amin'izay tianao. Misafidy ny toerana hametrahana azy ianao, ary ny tweak dia mamorona ireo habaka rehetra ireo ho anao hahafahana manao azy araka ny sary an-tsary anananao. Toa mora ve izany? Eny, hatramin'izao, tsy mbola nisy nahita zavatra tsotra sy azo ampiharina ho an'ireo izay tia korontana ao an-tokantrano.
Raha hitanao fa mahaliana ilay soso-kevitra dia mila mandeha amin'ny Internet fotsiny ianao Makeovr ary ampidino ny iray amin'ireo vola natolotr'izy ireo hihetsika toy izany. Ny marina dia misy karazany manan-danja ary anisan'ireo safidy ahitantsika ny sasany amin'ireo endri-tsoratra Nintendo malaza indrindra. Angamba ny zavatra tsara indrindra tokony hataon'i Apple dia ny famoahana io asa io amin'ny fomba nahaterahana, na ny filokana fotsiny amin'ny tweaks izay ahafahanao manao zavatra mitovy amin'ny jailbreak, fa ho an'ireo izay tsy mila fahasarotana, heveriko fa io no iray amin'ireo safidy tsara tokony hodinihina. hampifanaraka ny toetrantsika amin'ny iPhone. Sahinao ve ny manandrana azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Web Makeovr: tranokala mamorona habaka banga eo anelanelan'ny kisary amin'ny iPhone
Lahatsoratra tena tsara, fa ahoana no hametrahanao fiaviana samihafa amin'ny pejy tsirairay an'ny iPhone anao?
Tsy ho afaka amin'ny iPad ??
Alexander M (@amavo) dia hoy izy:
Efa nataoko io, mora be sy haingana ary mora nefa mora ny manana ny efijery fanao rehetra tokony hanana fotoana sy hamoronana
Valiny tamin'i Alexander M (@amavo)